KIA , OPTIMA , 2018 GT LINE , YGN . – Super Seven Stars
KIA , OPTIMA , 2018 GT LINE , YGN .
Buy For 43 000$
Warranty Expiry Date 06.December.2024
Insurance Expiry Date 12.December.2018
KIA Optima ကားသည် Engine power 2.4 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
KIA Pre Owned Cars ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) ( ၁ ) နှစ် မှ ( ၃ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၄၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
လမ်းမပေါ်တွင်သင်စီးနှင်းသွားသည့်အခါတိုင်း မြင်သူတိုင်းငေးမောကြည့်ရလောက်အောင် ခေတ်မှီဆန်းသစ်သည့် ဒီဇိုင်းနှင့် KIA_Optima_GT Line သည်ပျမ်းမျှတစ်ဂါလံလျှင် မြို့တွင်း မိုင် 20 မှ မြို့ပြင် မိုင် 30 အထိမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
ကား Body မှာလည်း ပိုမိုရှည်လျားကျယ်ပြန့်ပြီး လေခွင်းအားပိုမိုကောင်းစေသောကြောင့် တွေ့မြင်လိုက်ရုံဖြင့် Latest မော်ဒယ်မှန်း သိသာထင်ရှား ဆန်းသစ်နေစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Sporty ဆန်ဆန် Design နှင့် Chrome muffler Dual Exhaustပါဝင်သောကြောင့် လူငယ်များအကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်လက်သစ်လွင်သော ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လမ်းမထက်တွင် စီးနှင်း သွားသည့်အခါတိုင်းစတိုင်ကျခေတ်မှီနေစေမှာဖြစ်သည့် KIA_Optima _GT Line ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KIA ရဲ့နာမည်ကျော် Signature တစ်ခုဖြစ်သည့် Tiger Nose Grille ရှဲလ်ကိုလည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း ပိုမိုဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးထားပါသည်။
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် စက်နိုးရာတွင် သာမာန် Key များလို အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှည့်နေစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ထိတွေ့ ရုံဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပြီး စက်သတ်ရာတွင်လည်း အလွယ်တကူ ထိတွေ့ရုံဖြင့် စက်သတ်နိုင်ပါသည်။
အားသွင်းကြိုးမလိုဘဲ Wireless Station တွင်တင်လိုက်ရုံဖြင့်ဖုန်းအားအလိုအလျှောက်ဖြည့်ပေးသည့် ခေတ်မှီ Options တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါသည်။
Paddle Shifters , Cruise control နှင့် Bluetooth Hand-free System များပါဝင်သည့် D-Shape Steering Design ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကား၏အတွင်းခန်းအပြင်အဆင်မှာလည်းသပ်ရပ်လှပပြီးရှေ့မြင်ကွင်းအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြင်တွေ့နိုင်သောအနေအထား၊အသုံးဝင်သော Function ခလုတ်များစွာနှင့်ဆန်းသစ်ခေတ်မှီစေပါသည်။
အတွင်းခန်းထိုင်ခုံများမှာ အကောင်းစား Leather seat များဖြစ်သောကြောင့်ရိုးရိုး cloths seats ထက်ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာ သွားလာနိုင်သည့်အပြင် မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်းထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် အနံအသက် ဆိုးများထွက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Driver Seats နှင့် Front Passenger Seats တို့သည် လေပူ၊လေအေး ထုတ်ပေးနိုင်သော Ventilation Seats ဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတု အလိုက် သက်သောင့် သက်သာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
ကားမောင်းသူ၏အရပ် အနိမ့်၊အမြင့် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်၍ ထိုင်ခုံကို လိုအပ်သလို အနိမ့် အမြင့်၊ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း၊ခါး အနေအထားကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်လည်းကောင်း၊ကျောမှီ အနေအထား၊ ခြေသလုံး အနေအထားနှင့်ဦးခေါင်း အနေအထားတို့ကိုလိုက်၍ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ခြင်း အနေအထားတို့ကို စိတ်တိုင်းကျလိုအပ်သလို ချိန်ညိုနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျချိန်ညှိထားသော အနေအထားကိုပါ Memory မှတ်ထားနိုင်သည့်အတွက်လည်း သက်သောင့်သက်သာ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကားကွေ့သည်လမ်းကြောင်းနှင့် အတူ အလင်းဖြာထွက်သောကြောင့် Static Bending light System ပါဝင်သောကြောင့် ညအခါလမ်း အချိုးအကွေ့များတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။
Air Bags (7) လုံးပါဝင်သောကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မိခဲ့ပါက ကားပေါ်ရှိသူများအားလုံးကို ထိခိုက်မှုအန္တရယ် များမှ အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Harman/Kardon Premium Sound System ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အသံ Quality ကို ခံစားရရှိစေမှာဖြစ်သည့်အပြင် Speaker 10 လုံးပါဝင်ပြီး Surround Sound ဖြစ်သည့်အတွက် Music အသံမည်မျှပင် ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားသော်လည်း ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အက်ကွဲမှုလုံးဝမရှိသည့် Bass Quality တို့ကို ထူးခြားစွာခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်သည့်အပြင် ကားအတွင်း အသံလုံစနစ်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် Recording Studio များတွင် ဖွင့်ထားသကဲ့သို့ ရသကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
KIA ၏ နာမည်ကျော် Shine_Bright_Design နှင့် LED Rear Lamps ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KIA Optima GT with 18″ Alloy Wheels ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကားကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးတွင်လည်း High Stress points နေရာများတွင်သာမက ကားအရှေ့ခြမ်း၊အနောက်ခြမ်းနှင့် ဘေးဘက်အခြမ်းများကိုပါ 51% Advanced High Strength Steel ဖြင့်ဖန်တီးထားသောကြောင့်ကား Body ကြံခိုင်မှုမှာလည်း မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုမိုသာ လွန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Panoramic Sunroof ပါဝင်သောကြောင့် ရိုးရိုးပုံမှန် Sunroof များကဲ့သို့ ရှေ့ခုံတန်းတွင်ထိုင်သူ နှစ်ဦးသာ Sunroof ၏ခံစားချက်ကိုသိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ကားတစ်စီးလုံးတွင်ရှိသော Passenger များအားလုံး Panoramic Sunroof ၏ရသကို အပြည့်အ၀ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ Panoramic sunroof အောက်တွင် နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်နိုင်မည့်Auto Adjustable roll-up sun blinds ပါဝင်ပါသည်။
Heated Steering wheel ဖြစ်သောကြောင့် ကားမောင်းနှင်ရာတွင်လက်ချွေးဆီးထွက်ခြင်းကြောင့် Steering မချော်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာမောင်း နှင်နိုင်ပါသည်။
Blind Spot Detection စနစ်သည် မမြင်နိုင်သောနေရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့်အရာများကို အာရုံခံပေးသော စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဘေးနှင့်အနောက်ဘက်တို့မှ မိမိယာဉ်ကိုကျော်တက်လာစဉ်အချိန်တွင် နောက်ကြည့်ဘက်မှန်မှတဆင့် ယာဉ်မောင်းသူကိုသိရှိစေနိုင်သောကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချအန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Wheel Speed Sensor နှင့် Steering Angle Sensors တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ကားလက်ကိုင်၏ တည်ငြိမ်မူ နှင့် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် Electric Stability Control System ပါဝင်ပါသည်။
Bi-Xenon Headlamp ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်ထက်အလင်းအားပိုမိုကောင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6 Speed Automatic Transmission အပြင်Manual Transmission တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ကုန်းအမြင့်အတက်အဆင်းများ နှုင့် ခရီးသွားတောင်တက်လမ်းများတွင်လည်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ……
Hire Purchase စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ကားတန်ဖိုး၏ ၄၀% ပေးသွင်း၍ ကားအားပိုင်ဆိုင်နိူင်ပြီး ကျန် ၆၀% ကိုဘဏ်အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၁၂ ရစ် ၊ ၂၄ ရစ် အများဆုံး ၃၆ ရစ်ထိ လူကြီးမင်းတို့အဆင်ပြေသလို ပေးသွင်း၍ လဲဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ……